Ukuhlonishwa kwesibaya – iAfrika
Thina sizwe sikaPhunga noMageba sidume ngezinto eziningi, okubalwa kuzo ukuzigqaja ngamasiko nezinkolelo zethu, kanti ke nenhlonipho iyona futhi esaziwa ngayo kakhulu kusuke ebuncaneni bethu. Ukuhlonipha kwethu akugcine ekuhlonipheni abantu, noma nezilwane kuphela, sihlonipha ngisho nemvelo kanye nemizi esihlala kuyo. Kulelikhasa senaba ngendaba yokuhlonishwa komuzi wesintu, okuhlanganisa nesibaya kanye negceke ukubalula okumbalwa.
Uma kusengwa kusenga abesilisa kuphela kanti umuntu wesifazane akalithinti nhlobo ithunga ngaphambi kokuthi aze enzelwe umcimbi obizwa ngokunikwa isithembe, lokho okusho ukuthi usuke esengakwazi ukudla nokuthinta amasi ala akagcagcele khona. Kanti ke naye umlobokazi akalubhadi nhlobo esibayeni akangeni nhlobo, ngisho efuna amalongwe okubasa uwacosha ngenzansi kwesibaya noma ke athumele ingane ukuthi imcoshele amalongwe.
2 thoughts on “Ukuhlonishwa kwesibaya”
30/05/2022 at 05:27
Kuchazani ukuphupha kusengwa esibayeni, kusenga umfana nentombazana
31/05/2022 at 11:19
Cofa lapho uthole impendulo, https://iafrika.org/?s=amaphupho+ngokusenga